Adobe dia manambara ny fahatongavan'ny mpanao sary amin'ny iPad sy Fresco amin'ny iPhone ao amin'ny MAX | Famoronana an-tserasera
Adobe MAX dia ilay hetsika misy ny orinasan-tsarimihetsika amina endrika amina sary Nanambara Adobe Illustrator ho an'ny iPad sy Adobe Fresco ho an'ny iPhone. Ny fitaovana Apple dia tsara vintana amin'ity indray mitoraka ity.
Iray amin'ireo fanambarana tsara indrindra azonay tato anatin'ny volana vitsivitsy mifandraika amin'i Apple, satria miaraka amin'ny Illustrator dia miresaka sehatra lehibe iray izay mampiasa sary vongana izahay mba hamoronana sary isan-karazany.
Tonga i Adobe Fresco tamin'ity fahavaratra lasa ity ho an'ny PC Windows 10 noho izany mahaiza mankafy ny tadinao izay mandika izay azontsika atao amin'ny borosy tena izy. Ary izao dia rehefa afaka manana ny niainany sary avy amin'ny findainy ireo mpampiasa iPhone.
Vao avy nanambara izany izy tamin'ny Adobe MAX mandefa Adobe Illustrator amin'ny iPad ary Adobe Fresco amin'ny iPhone. Ny kinova farany izay nahatratra ny voalohany hatramin'ny beta tamin'ny volana martsa, noho izany dia tsy dia gaga loatra isika.
Amin'ity famotsorana ity amin'ny iPad Illustrator sahady manohana Apple Pencil Ary araka ny lazain'i Adobe ihany, "traikefa" manankarena andrasana eo anelanelan'ny fitaovana samihafa ampiasainay Illustrator. Nihatsara ny fampiharana iray noho ny fanehoan-kevitra voaray avy amin'ireo mpanandramana beta 5.000 ary lasa iray amin'ireo beta lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Adobe.
Lazao fa ny Ny kinova iPad dia hanaraka ny tondrozotra ho an'ny kinova desktop, Ka afaka miandry borosy vaovao sy fahaiza-manao Sensei isika.
Manana Fresco amin'ny iPhone ihany izahay amin'ny farany Hamela mivantana streaming ho an'ny fiarahamonina Adobe Behance aza izy io. Fahatongavana tena mahaliana roa ho an'ireo mpamorona izay mampiasa ny vokarin'i Apple hanamboarana sy hamoronana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe dia namoaka Illustrator ho an'ny iPad sy Fresco ho an'ny iPhone